‘हम दिल दे चुके सनम’पछि किन सँगै अघि बढ्न सकेनन् भन्साली र सलमान ? यस्तो रहेछ भित्री कथा – OSNepal
‘हम दिल दे चुके सनम’पछि किन सँगै अघि बढ्न सकेनन् भन्साली र सलमान ? यस्तो रहेछ भित्री कथा
काठमाडौँ, १ कात्तिक- केही समय अगाडि सञ्जयलीला भन्साली र सलमान खान प्याचअप भएको खबर बाहिर आयो । यद्यपि, भनिएको त्यो प्रोजेक्टले मूर्तरुप पाउन सकेन । सञ्जय र सलमानको मनमुटावकैबीच प्याचअप भएको खबरको चर्चा सेलाउन नपाउँदा फिल्म नै रोकियो ।